တရားရုံးချုပ်နည်းဥပဒေအမေရိကတိုက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး Nation ခဲ့သလား
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး ဘုရားမဲ့ဝါဒ & Agnosticism
စိတ်ရင်းမှန်နှင့်ပင် vociferously America မှာယုံကြည်ချက်နှင့်သူတို့၏ဘုရား၏ကိုးကှယျမှုအပေါ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်, ခရစ်ယာန်တစ်ဦး Nation ကြောင်းယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များစွာရှိပါသည်။ သူတို့ကဒီကိုယ်စားပူဇော်တစ်ခုမှာအငြင်းအခုံတရားရုံးချုပ်တရားဝင်မရေိကခရစ်ယာန်တစ်ဦးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အများဆုံးအစွန်းရောက်ဧဝံဂေလိ၏အရာအရာများစွာကို၏အမြိုးမြိုးအသည်းအသန်ချင် - အမေရိကားကိုတရားဝင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ယူဆရလျှင်, အစိုးရ, အခွင့်ထူးမှအခွင့်အာဏာရှိမြှင့်တင်ရန်, ထောက်ခံ, ထောက်ခံမှုများနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအားပေးလိမ့်မယ်။
အားလုံးတခြားဘာသာတရား၏နောက်လိုက်များနှင့်လောက ဘုရားမဲ့ဝါဒီ အထူးသဖြင့်, သဘာဝကျကျ "ဒုတိယလူတန်းစား" နိုင်ငံသားတွေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာနားလည်မှုလွဲသည်သန့်ရှင်းသောသုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကျောင်း v အတွက်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပျေါမှာအခြေခံသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 1892 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပေးနှင့်တရားမျှတရေးဒါဝိဒ်သည်ဘရူကရေးသား။ :
ဤရွေ့ကား, ဒီခရစ်ယာန်တစ်ဦးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကြောင်းအော်ဂဲနစ်ပြောသမျှကိုအမှားအယွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မှတရားမဝင်ကြေညာတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုထည့်သွင်း, သတိပြုမိစေခြင်းငှါအရာများစွာသောအခြားကိစ္စရပ်များ။
အဆိုပါကိစ္စတွင်သူ့ဟာသူ non-နိုင်ငံသားကြောင်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာမယ့်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စ prepay, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပင်ကဒီမှာလာမယ့်အနေဖြင့်ထိုသို့သောအားပေးဖို့ဆိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုတားမြစ်ထားသောအရာဖက်ဒရယ်ဥပဒပါဝင်ပတ်သက်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဘာသာ, ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပဲခရစ်ယာန်ဘာသာ, အထူးသဖြင့်, ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်မှာအမှုမဟုတ်ပါ။ အာဏာရကဲ့သို့သောသိမ်းကျုံးကြေငြာစေရန်အများကြီးလျော့နည်း, ဘာသာတရားအကြောင်းပြောမှာအားလုံးအများကြီးရှိသည်ဖို့အတှကျဒါဟာထို့နောက်အလွန်အံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မယ် "အမေရိကတိုက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ "
ဘာသာတရားဖက်ဒရယ်ဥပဒသူတို့ရဲ့ပရိသတ်အဘို့ပါမောက္ခချုပ်လာနှင့်ဖြစ်အီး Walpole Warren တစ်ဦးအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောသောသန့်ရှင်းသောသုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကျောင်းကစိန်ခေါ်ခဲ့သည်ကြောင့်ပြဿနာနှင့်အတူချည်နှောင်ခြင်းကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတော့တရားမျှတမှုဘရူအဲဒါကိုရှိသင့်သည်ထက်အများကြီးပိုပေးရန်လျှောက်ထားသောကြောင့်ဥပဒေပြုအလွန်အမင်းကျယ်ပြန့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူဟာသို့သော်တရားဝင်နှင့်နိုင်ငံရေးအရ, United States ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, သောစိတ်ကူးအပေါ်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အခြေခံဘူး "ခရစ်ယာန် Nation ။ "
အတော်လေးဆန့်ကျင်ခြင်း, အမှုအရာဘရူဤသူအထူးအဖြစ်တံဆိပ်များကို "ခရစ်ယာန် Nation" ကြောင်းညွှန်ပြအဖြစ်စာရင်းပြုစုသောကွောငျ့ "တရားမဝင်ကြေညာ။ " အရှင်သောကြောင့်ဤနေရာတွင်လာမယ့်နဲ့သူတို့ရဲ့အသငျးတျောမြားကိုစေခိုင်းရာမှအသူ့ကိုနှင့်ဥပဒေပြုကျော်ကြားနှင့်ထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖိတ်ခေါ်ထံမှအသင်းတော်များတားမြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုအခြားတရားသူကြီး (ပင်ဂျူးရဗ်ဗိ) မှမဖြစ်နိုင်သလိုပဲ - ဘရူရဲ့အမှတ်ဤတိုင်းပြည်ရှိလူခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းမျှသာဖြစ်ခဲ့သည် ။
ခရစ်ယာန်တစ်ဦး Nation: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်သူ၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများမကောင်းသောအကြံနှင့်လွဲမှားစွာအနက်ဖန်တီးနိုင်ပုံကိုသဘောပေါက်, တရားမျှတမှုဘရူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမည်ရ 1905 ခုနှစ်စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အထဲတွင်သူ wrote:
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သဘော [အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု] ခရစ်ယာန်တစ်ဦးလူမြိုးတစျမြိုးကိုချေါဆိုနိုငျသနညျး မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာထူထောင်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ပါကကူညီပံ့ပိုးရန်မဆိုထုံးစံ၌အနိုင်အထက်ကြသည်ကိုလူများသောသဘော။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထူးသ '' ညီလာခံအဘယ်သူမျှမပညတ်တရားတော်ကိုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစ်ခုထူထောင်လေးစားသို့မဟုတ်တို့ကိုအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတားမြစ်စေရမည်။ '' ကြောင်းထောက်ပံ့ ဒါကြောင့်အားလုံး၎င်း၏နိုင်ငံသားများတကယ်တော့သို့မဟုတ်အမည်ဖြင့်ခရစ်ယာန်များကိုအတွက်ဖြစ်စေသောသဘောခရစ်ယာန်မဟုတ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဘာသာတရားအားလုံးကိုသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းအခမဲ့အတိုင်းအတာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏နံပါတ်များကိုတခြားဘာသာတရားအမည်ခံနှင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့ကိုငြင်းပယ်။ [ ... ]
မခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အလုပ်အကိုင်ရုံးကိုင်ပြီးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအတွက်, ဒါမှမဟုတ်အသိအမှတ်ပြုမှုမှမရှိမဖြစ်ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးအရသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရဆက်ဆံတစ်ခွအေနအေကြောင်းသဘောအရခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်အစိုးရကဘာသာတရားအားလုံးကို၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
တရားမျှတရေးဘရူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, ဒါကြောင့်, United States မှာဥပဒေများခရစ်ယာန်ဘာသာပြဋ္ဌာန်းရန်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းကိုသာခရစ်ယာန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုထင်ဟပ်သင့်ကြောင်းငြင်းခုန်ဖို့မဆိုကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကယ်စင်စစ်သူကရေးသားခြင်းခံခဲ့ရသည်သည့်အခါပင် truer ခဲ့သည့်လေ့လာရေး - သူရိုးရှင်းစွာဤတိုင်းပြည်ကလူတွေခရစ်ယာန်ဖြစ်လေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတခုလေ့လာရေးအောင်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးင်ဘယျသူယခုအထိယနေ့မှတဆင့်ရှေးရိုးစွဲဧဝံဂေလိနေဖြင့်ဆင်းရာ၌ငြင်းခုံခြင်းနှင့်တောင်းဆိုမှုများများစွာကိုငြင်းပယ်အဖြစ်သှားသောအလုံအလောက်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့၏စိတ်ကူးကိုဖော်ပြခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ငါ့ကိုရိုက်အရာကိုပြောတရားမျှတရေးဘရူ၏နောက်ဆုံးဝါကျ, "အစိုးရသည်နှင့်ရှိသမျှသောဘာသာတရား၏လွတ်လပ်သောရှိနေဆဲရပါမယ်" ဟု paraphrase တကယ်တော့တတျနိုငျသ ဘုရားကျောင်း / ပြည်နယ်ခွဲခြာ ။
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံလူဖြူရှည်လျား America မှာအများစုဖြစ်ရပြီနှင့်သူတို့ပိုပြီးမကြာသေးမီကထက်ဘရူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၏အချိန်မှာ ပို. ပင်တစ်အများစုဖြင့်ပြီးကြ၏။
သူတတျနိုငျသထို့ကြောင့်သကဲ့သို့လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်နည်းတူတိကျစွာပြောသည် အမေရိကတိုက်တစ်ဦးက "အဖြူရောင် Nation ။ " ကြောင်းအဖြူကလူအခွင့်ထူးခံဖြစ်နှင့်ပိုပြီးအာဏာရှိသည်သင့်ကြောင်းပါဝငျမလား? ၏သင်တန်းအချိန်တွင်အချို့သောဧကန်အမှန်ဒါကြောင့်ထင်ကြလိမ့်မယ်, မသော်လည်း။ သူတို့ကလည်းအားလုံးခဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုရှိလိမ့်မယ်။
အမေရိကတိုက်ကို "အများစုခရစ်ယာန်လူမျိုး" ကြောင်းဟုတိကျပါလိမ့်မယ်ဟုမယ်လို့အဖြစ်, မကောင်းသောအကြံကိုမဖြစ်စေ "အမေရိကတိုက်အများအားဖြင့်ခရစ်ယာန်များ၏လူတမျိုးဖြစ်၏။ " ဤသည်ကိုလည်းလုံးလုံးလြားလြားမဆိုအပိုအခွင့်ထူးသို့မဟုတ်ပါဝါအများစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလာသင့်ကြောင်းအယူအဆကိုသယ်ဆောင်မရှိဘဲအများစုသည်အဘယ်အရာအုပ်စုတစ်စုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေ vs. အစ္စလာမ်ဘာသာ: အဘယ်ကြောင့်ပဋိပက္ခရှိပါသလား?
အဆိုပါ Matrix နှင့်နောစ: အ Matrix တစ်ဦးနောစတရုပ်ရှင်ပွဲတော်လား?
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ Theists ထက်ပိုဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ပါသလား
ကျင့်ဝတ် & ငျြ့တရား: အပြုအမူ၏ဒဿနိကဗေဒ, ရွေးချယ်မှုများနှင့်အက္ခရာ
ဘာသာတရား မှစ. လွတ်လပ်ခွင့်ကဘာလဲ?
မကောင်းပါယုံကွညျခွငျးနှငျ့ပြိုလဲအပေါ်ဆတ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု Themes Exploring
Aeschylus အားဖြင့် Agamemnon ၏ကြံစည်မှုအကျဉ်းချုပ်
ရယ်စရာအကောင်းဆုံး 20 911 လုပ်ငန်းရှင်များအစဉ်အဆက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတောင်းဆို
Il ya - အင်္ဂလိပ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်
"Tina, သငျသညျအဆီဝက်ဆီ!" ရယ်စရာအကောင်းဆုံး '' နပိုလီယံဒိုင်းနမိုက် '' Movie, Quotes
1500 မှ 3000 မီတာကနေသင့်ရဲ့ရေကူးလေ့ကျင့်ခန်း Build
"သွေး, ပင်ပန်း, နျးပဲနှင့်ချွေး" Winston Churchill တို့ကမိန့်ခွန်း
ဗုဒ္ဓဘာသာ: 11 ဘုံနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနှင့်အမှား
Lichtenberg ကိန်းဂဏန်းများ Make ရန်ကဘယ်လို
ထိပ်တန်း 10 Ellie သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်သီချင်းများ
သစ်တောမြေတိုင်းတာခြင်းဘာသာရပ်နည်းလမ်းများ - distance ကိုနှင့် angle
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းဥရောပ Pop ဂီတ / ရော့ခ်အဆိုတော်များ
ဂျက် Burke ကဂျူနီယာအလုပ်ရှာဖွေရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
¿ Que puntuaciónက de TOEFL se necesita မသန်စွမ်း la Universidad en အမေရိကန်နိုင်ငံ?
Donald Trump ရဲ့မတ်လ-a-ဂို့ကလပ်အကြောင်းသိထားမှ9အရာ
ဝါကျ Negation ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး Bottle သအတွက်မီးသတ်ထုတ်လုပ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: တိုက်ပွဲနှင့် Dunkirk ၏ကယ်ဆယ်ရေး
'' Ir '' ၏ conjugation
တောက်ပနေရေညှိ Make ရန်လွယ်ကူသော